Farmaajo: “Xalka keliya ee furan waa wadahadalka, is qancinta & dib ugu laabashada Shirka”. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Farmaajo: “Xalka keliya ee furan waa wadahadalka, is qancinta & dib ugu...
Farmaajo: “Xalka keliya ee furan waa wadahadalka, is qancinta & dib ugu laabashada Shirka”.
Madaxweynaha Muddo Xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay soo duubay fariin ku saabsan xaaladda Dalka, dabaca go’aanka muddo dheereysiga & siyaasadda cakiran ee ay gashay Caasimadda ayaa dhowr fariin diray.
Ugu horreyn waxa uu dul istaagay rabshada siyaasadeed ee ka dhacday Degmooyin katirsan Gobolka Banaadir, isaga oo dhinacyada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay joojiyaan wax weliba oo dalka u horseedi kara xasilooni darro, barakac & colaad.
“Dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed waxa aan ugu baaqayaa in la joojiyo waxyaabaha horseedi kara in dalka uu galo xasilooni darro oo ay kamid tahay arrimaha ciidanka, kala qaybinta Bulshada & burburinta Hantida Dadweynaha” Sidaasi waxaa yiri MW Farmaajo.
Waxa uu meesha ka saaray in Dalka loo horseedo burbur sababa in waddanka uu dib ugu laabto dhibaabooyinkii uu soo maray, madax xilal kala duwan dalka kasoo qabatay oo uu ula jeeday musharixiinta waxa uu dusha ka saaray in ay ka shaqeynayaan colaad.
“Marnaba ma dhaceyso in Shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur & Qax, sidaas darteed Dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay kamid yihiin Siyaasiyiin Shalay xilal Dalka usoo hayay, maantana doonaya in ay u qabtaan xilkaas iyo mid lamid ah ay qabtaan in ay u horseedaan fowlado si ay kursi ugu gaaraan” ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Maalmihii lasoo dhaafay waxa ay astaan cad u ahayd sharta & khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye & Barakaciye, intii aan noqon lahayn barakiciyaal waxa aan ka dooranay badbaadiyaan, Danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan” ayuu sii raaciyay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Farmaajo.
Mar uu ka hadlay arrimaha Doorashooyinka, wadahadalka, go’aankii Golaha Shacabka ee 12-kii April 2021 & qodobada salka u ah wada-xaajoodkii ka socday Teendhada Afisiyooni oo ay Dowladdu si cad u sheegtay in uu fashilmay waxa uu dul istaagay qorshaha cusub ee lagu wajahayo.
“Walaalayaal Maadaama aan ahayn ilaaliyaha dastuurka oo ay waajib igu tahay in aan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee horay loo gaaray & Sharcigii u dambeeyay ee Golaha Shacabka meelmariyay, maalinta sabtida waxa aan hortagayaa Baarlamaanka si dib loogu soo celiyo heshiiskii dooorashooyinka ee dhexmaray Dowladda Federaalka & DG”.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu wajahay culeys siyaasadeed oo ka dhashay go’aankii Golaha Shacabka ee muddo dheereysiga oo dhankiisa ka yimid, maadaama uu waayay cid ku taageerto waxaana si cad uga hor yimid QM, EU, AU, Dowlado & dhinacyo kala duwan.